सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको उपाधि विजेता आर्मीलाई ११ लाख, अर्को वर्षको विजेताले २१ लाख पाउने | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको उपाधि विजेता आर्मीलाई ११ लाख, अर्को वर्षको विजेताले २१ लाख पाउने
on: January 16, 2018 खेल विविध
सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको उपाधि विजेता आर्मीलाई ११ लाख, अर्को वर्षको विजेताले २१ लाख पाउने
माघ २, धनगढी । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले ‘नेपाल आइस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
सोमवार भएको फाइनल खेलको निर्धारित समयमा कुनै पनि टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै आर्मी विजयी भएको हो । पेनाल्टी सुटआउटमा आर्मीले एपिएफलाई चारविरुद्ध पाँच गोलले पराजित गरेको हो ।
उपाधिसँगै आर्मीले रू. ११ लाख ११ हजार १ सय ११ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो भने उपविजेता एपिएफले रू. ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ मा चित्त बुझायो ।
प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका आर्मीका कप्तान भरत खवासले पुरस्कारस्वरुप यामाहा मोटरसाइकल प्राप्त गरे । यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर आर्मीका विकेश कुथु, उत्कृष्ट डिफेन्डर एपिएफका टोप विष्ट, उत्कृष्ट फरवार्ड आर्मीका सन्तोष तामाङ र राइजिङ प्लेयर सुदूरपश्चिम–११ का गोलकिपर अमानत शेख घोषित भए । सबै विधाका उत्कृष्ट खेलाडीले जनही रू. १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
उपाधि विजेता र उपविजेतालाई प्रतियोगिता समापन समारोहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले ट्रफी र पुरस्कार प्रदान गरे । गत पुस २१ गतेदेखि शुरु भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका १२ टोलीको सहभागिता थियो ।
पुरस्कार राशि दोब्बर
सर्वाधिक पुरस्कार राशिको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा अर्को वर्ष झन्डै दोब्बरले वृद्धि हुने घोषणा गरिएको छ । तेस्रो संस्करणको खप्तड गोल्ड कपको विजेतालाई रू. २१ लाख पुरस्कार दिइने आयोजक सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्टस क्लबका अध्यक्ष सुरेश हमालले समापन समारोहमा घोषणा गरेका छन् ।